साम्राज्ञी बक्स अफिसकी ‘रानी’, ‘ए मेरो हजुर २’को आक्रामक कमाइ – Karnalikhabar
पहिलो चलचित्र ‘ड्रिम्स’ रिलिजसँगै नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सर्वाधिक चर्चामा रहेकी नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको मनमा डर र उत्साह दुबै थियो । उनी अभिनित दोश्रो चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’ले बक्स अफिसमा गर्ने कमाइले उनको करिअरको नयाँ गोरेटो कोर्ने पक्का थियो । पहिलो चलचित्रमा नायक अनमोल केसीले अधिकांश क्रेडिट लिदा साम्राज्ञीको अभिनयको तारिफ भएको थियो ।
यसैले पनि शुक्रबारदेखि रिलिजमा आएको चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’को बक्स अफिस व्यापार उनका लागि विशेष थियो । चलचित्रको ३ दिने व्यापारसँगै साम्राज्ञीको क्रेज पनि चुलिएको छ । नायिका झरना थापा निर्देशित डेब्यू चलचित्रले ३ दिनमै ३ करोड माथिको ग्रस कलेक्शन गरेको छ । ३ दिनमै निर्माता सुनिलकुमार थापाले आफ्नो लगानी सुरक्षित गरिसकेका छन् ।
साम्राज्ञीको मात्र होइन, चलचित्रको व्यापारले नव-नायक सलिमान बनियाँलाइ पनि उदयमान स्टारको दर्जा दिएको छ । काठमाण्डौका वितरक गोविन्द शाही र काठमाण्डौ बाहिरका वितरक केदार पराजुलीका अनुसार चलचित्रले शनिबार नेपाली चलचित्रको इतिहासमै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । वितरकले दिएको आँकडा अनुसार चलचित्रले काठमाण्डौमा शुक्रबार ४३ लाख ३८ हजार, शनिबार ८७ लाख ७५ हजार र आइतबार ५३ लाख १५ हजारको कारोबार गरेको छ । यस्तै, काठमाण्डौ बाहिर चलचित्रले शुक्रबार ३३ लाख २१ हजार, शनिबार ७२ लाख ५५ हजार र आइतबार ५१ लाख २५ हजारको कारोबार गरेको छ । शनिबार चलचित्रले पोखरा र चितवनमा नयाँ व्यापारिक रेकर्ड समेत राखेको छ ।
शनिबार पोखरामा १७ लाख र चितवनमा १२ लाखको व्यापार गर्न सफल चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’ले मंगलबारको इन्द्रजात्राको बिदा र बिहिबारको निजामती कर्मचारी दिवसको विदालाइ पनि पूर्ण रुपमा सदुपयोग गर्ने देखिएको छ ।
योसँगै नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह बक्स अफिसमा ‘क्विन’ भन्ने दौडमा देखिएकी छिन् । लगातार उनी अभिनित दोश्रो चलचित्रले बक्स अफिसमा बम्पर कारोवार गरेपछि साम्राज्ञीको डिमाण्ड चुलिने पक्का छ । नव-नायक सलिनमान बनियाँको क्रेज पनि आकाशिएको छ । सलिनलाइ लिएर चलचित्र निर्माण गर्न धेरै निर्माता लालयित देखिएका छन् । तर, सलिनले दोश्रो चलचित्रमा काम गर्ने वा नगर्ने भन्ने तय गरिसकेका छैनन् ।
चलचित्रको कथावस्तु, गीतसंगीत र कमेडी पाटोलाइ सर्वाधिक रुचाइएको छ । नायक सलोन बस्नेतको भूमिकालाइ दर्शकले सबैभन्दा धेरै प्रशंसा गरेका छन् । योसँगै डेब्यू निर्देशक झरना थापा सफल निर्देशकको रुपमा चिनिएकी छिन् । हिन्दी चलचित्र ‘बादशाहो’लाइ समेत किनारा लगाउँदै ‘ए मेरो हजुर २’ले बक्स अफिसमा बम्पर कारोवार गरेपछि अब नेपाली चलचित्रले हिन्दी चलचित्रलाइ विस्थापित गर्न थालेका छन् ।
अघिल्लो - यस्तो पो प्रेम ! प्रेमीका लागि राजदरबार छोड्दै जापानी राजकुमारी !
आमिर खानका लागि प्रियंकाको यस्तो त्याग - पछिल्लो